Ampidino Recuva ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (7.30 MB)
Recuva dia programa fanarenana rakitra maimaim-poana izay anisanireo mpanampy lehibe indrindra aminny mpampiasa aminny famerenana aminny laoniny ireo rakitra voafafa ao aminny solosainao. Ho anny safidy tsara kokoa sy feno kokoa dia azonao atao ny manandrana avy hatrany ny EaseUS Data Recovery.
EaseUS Data Recovery Le Magicien, izay efa teo aminny rivotra nandritra ny 17 taona, tanteraka ny asany rehetra manao izay Recuva atao. Ankoatrizay dia manome antsipiriany maro samihafa izay tsy vitani Recuva atao. Satria rindranasa vaovao sy maoderina be dia be izy io, dia misy endri-javatra mahasoa. Ny antony lehibe anoloranay azy ity ho solonny Recuva dia ny fahitanao ny rakitra mora foana. Ao aminny interface EaseUS, ny toerana misy ireo fisie dia eo alohanao mivantana ary afaka jerenao mora ny fisie izay tadiavinao hahitana ireo rakitra.
Izy io koa dia manana ny fotoana ahitanao ireo rakitra voafafa avy aminny kapila ivelany. Noho izany antony izany, tsy eo aminny solosaina; Azonao atao ihany koa ny mitady ao anatinny fitaovana toy ny HDD, USB Memory. EaseUS afaka sitrana maro samihafa ny antontan-taratasy toy ny antontan-taratasy, sary, mozika sy ny mailaka. Manodidina ny 100 ny totalinny fisie azonao averina. Raha ny marina, dia mialoha Recuva aminny alalanny fanomezana maro samy hafa sy ny endri-javatra iray nanangona ny zava-drehetra ambaninny tafo. Azonao atao ny mitsidika anio adiresy io izao mba hanandramanao azy.
Azonao atao ny manara-maso ireo rakitra voafafa avy aminny solosainao miaraka aminny fanampianny mpamosavy aminny programa, izay azonao atao ny manomboka mampiasa aorianny dingana fametrahana tsotra be.
Miaraka amini Recuva, izay iray aminireo rindrambaiko mahomby azonao ampiasaina hamerenana ireo rakitra izay nesorinao tsy nahy na tsy nahy tao aminny solosainao, azonao atao ny maka sary ho anny sary voafafa, feo, antontan-taratasy, horonan-tsary, rakitra voafafa ary mailaka avy aminny solosainao. Vokatry ny fizahana, ny antontan-taratasy fa afaka sitrana na fanamboarana ny ho voatanisa ho anareo. Aminizany fomba izany, dia afaka manana ny fahafahana haingana ny antontan-taratasy efa niasa ho tianao.
Noho ny fandaharana, izay tolotra fomba roa samy hafa scanning ho any aminny mpampiasa mba hamerina voafafa antontan-taratasy, dia afaka manatanteraka fohy ezaka fototra Notarafina ho voafafa antontan-taratasy, ary koa ny manao intsony-maharitra lalina notarafina. Raha tsy hitanao ny fisie izay tadiavinao ho sitrana vokarinny scannny fotony dia azo inoana fa mamela anao hahita ireo rakitra tadiavinao ny safidy fikarohana lalina.
Miaraka Recuva, izay tolotra anareo ny fahafahana scan anatiny disks eo aminny solosaina ary koa ivelany disks fa ho mifandray ao aminny solosaina, dia afaka ihany koa ny tahirin-kevitra voafafa sitrana avy aminny any ivelany disks na karatra SD.
Aminny faranny fizahana fizahana; Raha hifidy misy sary rakitra eo aminny varavarankely ny recoverable antontan-taratasy, dia afaka hijery kely mialoha izany rakitra sary mba hahafahanao hanapa-kevitra izay antontan-taratasy tianao ho mora kokoa sitrana.
Ho famaranana, raha toa ka mila ny fandaharana mba sitrana voafafa antontan-taratasy avy aminny solosaina, Recuva dia tokony tena ho iray aminireo rindrankajy voalohany tokony hiezaka.
Ity programa ity dia tafiditra ao anatinny lisitry ny programa Windows maimaim-poana.
Recuva dia manao scans roa, fanarenana tsotra sy scan aminny alàlanny scan lalina, mba hamerenana ireo rakitra voafafa, hamerenana angona. Ny fizahana voalohany mamakafaka ny solosaina ary mitodika ho anny antontan-taratasy fa afaka miezaka ny Recuva sitrana. Ny scannny faharoa dia mandinika ireo rakitra ireo mba hikajiana ny mety hahomby aminny laoniny. Raha intsony Notarafina ny voalohany raha ny any fandrosoana, dia tsy mampiseho Recuva misy vaovao momba ny raki-daza. Raha ajanonao ny scannny faharoa raha mbola eo am-pandrosoana izy io, dia azonao atao ny mijery ireo rakitra hitani Recuva, fa ny fampahalalana momba ny satan-kevitra dia tsy ho marim-pototra satria omenny scan manontolo. Andao hojerentsika ny fizotranny fanarenana;
Tsotra sitrana: Ny voalohany ianao mamafa ny antontan-taratasy, dia tsy overwrite Windows ny Tompo File Table teny mandra-mampiasa ny antontan-taratasy indray. Recuva dia mijery ny takelaka Master File momba ireo rakitra voamarika fa voafafa. Koa satria ny fisoratana anarana Master File Table ho anny fisie voafafa dia mbola vita (ao anatinizany ny famafana ny rakitra, ohatrinona ny habeny ary ny toerana nisy azy teo aminny kapila mafy), i Recuva dia afaka manome anao lisitra feno rakitra maro ary hanampy anao sitrana azy ireo. Na izany aza, rehefa mila Windows mba hamorona antontan-taratasy vaovao, dia reuses ary overwrites Tompo ireo File Table anglisy ary koa ny toerana eo aminny fiara mafy izay antontan-taratasy vaovao-mitoetra. Midika izany fa ny anao intsony haingana mampiasa ny solosaina sy ny mihazakazaka Recuva, ny tsara kokoa ny mety tsy sitrana ny raki-daza.
Fizahana lalina dingana: Ny lalina dingana Notarafina mampiasa ny Tompo File Table mba hitady antontan-taratasy sy ny anatinilay fiara. Recuva mandinika sampahom-boaloboka tsirairay (bilaogy) ny mpamily mba hahita rakitra lohapejy milaza fa rakitra no nihazakazaka. Ireo lohateny ireo dia afaka milaza amini Recuva ny anaranny fisie sy ny karazany (oh: JPG na fisie DOC). Noho izany, dia lalina scanning maka ela. Misy karazana rakitra anarivony ary i Recuva dia afaka mamantatra ireo izay tena manandanja. Deep Scan manokana dia manana ny fahafahana indray izao manaraka izao karazana rakitra:
Sary: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF
Microsoft Office (talohanny 2007): DOC, XLS, PPT, VSD
Rakitra hafa karazana: PDF, tahirinao RTF, VXD, URL
Raha tsy zarazaraina aminny fisie ilay rakitra dia tsy ho vitani Recuva ny manangona azy ary hisy fiantraikany ratsy aminny fizotrany ny fanimbana.
Avereno aminny Recuva ireo rakitra voafafa
Recuva Wizard dia alefa aminny toerana misy anao rehefa manomboka ny Recuva ianao ary mitarika anao aminny fizotranny fanarenana rakitra. Ka dia samy tsy maintsy atao dia ny mandeha aminny alalanny dingana ireo, ary mipetraka indray.
Kitiho fotsiny ny bokotra Next raha hanohy aminny efijery voalohany.
Tianao ve ny rehetra indray ny raki-daza amin ny dingana faharoa Magicien na no tianao mba hahasitrana manokana karazana rakitra? manontany anao mamaritra. Tsirairay ny antontan-taratasy mampiseho ny sokajy ihany no mampiasa ny antontan-taratasy izay manaraka fanitarana:
Rehetra Files: Ity fikarohana ho anny rehetra raki-daza amin rakitra Notarafina vokatra, na inona na inona ny karazana rakitra.
Images: Ity fikarohana ho anny JPG, PNG, manta, GIF, JPEG, BMP sy Tif raki-daza.
Mozika: Mikaroka rakitra MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, FLAC, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MIDI, MID, RMI ary MP2 io.
Documentation: Mikaroka rakitra DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX ary ODC ity.
Lahatsary: ​​Mampiseho rakitra AVI, MOV, MPG, MP4, FLV, WMV, MPG, MPEG, MPE, MPV, M1V, M4V, IFV SY QT ity.
Voageja: Mampiseho rakitra ZIP, RAR, 7Z, ACE, ARJ ary CAB ity.
Mailaka: mampiseho fisie EML sy PST io.
Fanamarihana: Raha toa ka mila mba hahasitrana rakitra izay tsy manana ny anankiray aminireny fanitarana, dia tokony hifantina Files rehetra.
Ny mpamosavy dia mandrisika anao hilaza izay toerana namafana ireo fisie taminity dingana ity. Raha misafidy ny My Documents, Recycle Bin, na aminny toerana manokana ianao dia hizaha ny toerana notondroinao fotsiny i Recuva fa tsy hitily ny kapila manontolo ho anireo rakitra voafafa.
Ary ianareo no vonona ny hitady voafafa rakitra. Mba hanombohana ny fizahana fizahana dia tsindrio fotsiny ny bokotra Start.
Haben'ny rakitra: 7.30 MB
Fanavaozana farany: 11-07-2021
Inkscape dia rindrambaiko fanovana sary maloto loharano misokatra. Mitovy aminireo programa...
Ireo izay te hanao sary aminny solosainizy ireo matetika dia manana safidy hampiasa ny rindrambaiko...
Sintomy madio ny tompoko Clean Master dia mpanadio sy mamporisika solosaina maimaimpoana. Clean...
Norton Ghost dia programa fandrindrana angon-drakitra mandroso aminny fiarovana sy fanohanana ny...
Norton Removal Tool dia programa maimaimpoana maimaimpoana izay manampy anao hanala mora foana ny...
FreeCommander XE dia safidy iray aminny Windows Explorer izay efa napetraka mialoha ao aminny...